Dɛn na Wubetumi Ahu Wɔ Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea Hɔ?
KENKAN WƆ Afrikaans Ahanta Aja Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latgalian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali New Zealand Sign Language Ngabere Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Ponapean Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Russian Russian Sign Language Rutoro Réunion Creole Salvadoran Sign Language Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai (Northeastern) Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Yesu Kristo ka kyerɛɛ n’akyidifo sɛ: “Momma mo kanea nhyerɛn nnipa anim, na wɔahu mo nnwuma pa na wɔahyɛ mo Agya a ɔwɔ soro no anuonyam.” (Mateo 5:16) Ɛno nti, yɛde abɛɛfo mfiri a ebi ne Intanɛt redi dwuma yiye na ama yɛatumi ayɛ saa. Wubehu Yehowa Adansefo gyidi ne wɔn nnwuma ho nsɛm wɔ yɛn Intanɛt dwumadibea a wɔato din jw.org no. Dɛn na ɛwɔ hɔ?
Nsɛm a wɔtaa bisa ho mmuae a Bible de ma. Wubetumi anya nsɛm a ɛho hia sen biara a nkurɔfo abisa no bi ho mmuae wɔ hɔ. Wɔama saa nsɛmmisa yi mu asia ho mmuae wɔ kratawa a wɔato din sɛ So Wopɛ sɛ Wuhu Nokware No? a ɛwɔ kasa bɛboro 400 mu no mu wɔ dwumadibea hɔ. Wubetumi nso ahu Wiase Foforo Nkyerɛase no a ɛwɔ kasa bɛboro 100 mu ne nhoma ahorow a yɛde sua Bible a ebi ne Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? ne Ɔwɛn-Aban ne Nyan! a aba foforo wɔ hɔ. Wubetumi akenkan anaa woatie saa nhoma ahorow yi pii mu nsɛm wɔ Intanɛt no so, anaa woatwe no sɛ PDF, anaa EPUB, anaasɛ wode agu apaawa so abɔ atie. Wubetumi mpo atintim nkratafa kakra wɔ obi a n’ani gye asɛm no ho ankasa kasa mu na wo ne no akosusuw ho! Video pii a ɛwɔ mum kasa ahorow mu wɔ hɔ. Wubetumi atwe Bible a wɔakenkan, Bible drama ahorow, ne nnwom a ɛyɛ dɛ na woabɔ atie bere biara a wopɛ.
Yehowa Adansefo ho nokwasɛm. Nneɛma a wɔde gu hɔ no bi nso ne yɛn adwuma a yɛreyɛ wɔ wiase nyinaa no ho nsɛm foforo ne ɛho video, nsɛm a asisi a ɛfa Yehowa Adansefo ho, ne mmoa a yɛde ma wɔn a atoyerɛnkyɛm ato wɔn no ho nsɛm. Wubetumi ahu nhyiam ahorow a wɔrebɛyɛ ho amanneɛbɔ ne baa dwumadibea ahorow address wɔ hɔ.
Yɛnam eyinom so rema nokware hann no ahyerɛn adu asase ano nohoa tɔnn. Nkurɔfo a wɔte asasepɔn biara so, a Antarctica ka ho, rehu nokware hann no. Yɛbɔ mpae sɛ ‘Yehowa asɛm nkɔ so ntrɛw ntɛmntɛm’ nkɔ asase nyinaa so na ɛnhyɛ Onyankopɔn anuonyam.—2 Tesalonikafo 3:1.
Ɔkwan bɛn so na jw.org reboa nnipa pii ma wɔahu nokware a ɛwɔ Bible mu no?
Dɛn na wopɛ sɛ woyɛ ho nhwehwɛmu wɔ yɛn Intanɛt dwumadibea hɔ?
KƆKƆBƆ BI NI:
Wɔn a wɔsɔre tia yɛn no abuebue Intanɛt dwumadibea ahorow bi a wɔde ka atosɛm fa yɛn ahyehyɛde no ho. Wɔn botae ne sɛ wɔde bɛtwe nkurɔfo afi Yehowa som ho. Ɛnsɛ sɛ yɛkɔ saa dwumadibea ahorow hɔ.—Dwom 1:1; 26:4; Romafo 16:17.
Yɛde JW.ORG Ka Bible mu Asɛm Kyerɛ Nkurɔfoɔ